Dzazvino Fraport Airport Traffic Mifananidzo yaGunyana 2021: Zvakanaka!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Dzazvino Fraport Airport Traffic Mifananidzo yaGunyana 2021: Zvakanaka!
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • Press zvinoburitswa • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Frankfurt Airport (FRA) yakagashira vamwe vafambi vanosvika mamirioni 3.1 munaGunyana 2021 - inomiririra 169.1 muzana kuwedzera gore-ne-gore, kunyangwe ichienzaniswa neyakaonda kwazvo Nyamavhuvhu 2020. Kukura kwevatakuri kwakaramba kuchingotungamirwa zvakanyanya nemotokari yezororo.
Kukura kwevapfuuri kwakaramba kuchinyanya kutungamirwa nemotokari yezororo. Mumwedzi unoshuma, nhamba dzevatakuri veFRA - vachiri kutumira 54.0 muzana kudzikira kana ichienzaniswa naSeptember 2019 - zvakare yakazosvika ingangoita hafu yeyakaitika pre-denda, zvichidaro kuenderera neyakajeka mamiriro akaiswa muna Nyamavhuvhu 2021.
Pakati pemwedzi mipfumbamwe yekutanga ya2021, FRA yakashandira huwandu hwevane mamirioni gumi nemashanu. Izvi zvakakonzera kuderera kwe15.8 muzana zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, zvichipesana ne2.2 muzana yemasiraidhi zvichienzaniswa nemwedzi mipfumbamwe yekutanga ya70.8.
Cargo throughput (airfreight + airmail) yakaenderera mberi nekukura kwayo kwakasimba munaGunyana 2021, ichikwira zvinoonekwa ne13.4 muzana gore-ne-gore kusvika pa188,177 metric ton.
Kuenzaniswa naSeptember 2019, cargo tonnage yakawana 7.7 muzana mumwedzi wekuzivisa. Kufamba kwendege kwakakwira ne66.1 muzana gore-ne-gore kusvika 28,135 kutora uye kumhara. Yakaunganidzwa yakakwira kurebesa kurema masosi (MTOW) yakawedzera ne61.5 muzana kusvika ingangoita mamirioni 1.8 metric matani.
MunaGunyana 2021, nhandare dzendege dzeFraport dzenyika dzakawanda dzakaramba dzichitaura zvakanaka nezvekufamba kwemigwagwa. Kunze kweXi'an Airport (XIY) muChina, nhandare dzeFraport dzeboka pasirese dzakawana kukura kwakakura. Pane dzimwe nhandare dzeGroup, traffic yevanokwira yakakwira neanopfuura zana muzana gore-ne-gore - kunyangwe ichienzaniswa nematanho akaderedzwa zvakanyanya munaGunyana 100. Mukuenzanisa nedenderedzwa risati rasvika munaSeptember 2020, mazhinji enhandare dzeGraport dzeGroup pasi rese vachiri kunyoresa vashoma. Nekudaro, mamwe maGroup enhandare anoshandira nzvimbo dzinodikanwa dzevashanyi - senge nhandare dzeGreek kana Antalya Airport paTurkey Riviera - vakaona traffic ichikwira kusvika kungangoita 2019 muzana yematanho epamberi pematambudziko mumwedzi wekuburitsa (uchienzaniswa naSeptember 80).
Ljubljana Airport (LJU) muguta guru reSlovenia yakagamuchira vatakuri 65,133 munaGunyana 2021. Panhandare yendege yeBrazil yeFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA), motokari dzakabatana dzakawedzera kusvika pavatakuri 820,169 1.1. Peru's Lima Airport (LIM) yakagamuchira vangangoita mamirioni XNUMX vafambi mumwedzi wekuzivisa.
Hwerengedzo yemigwagwa yenhandare gumi nenhatu dzeGreek nendege yakakwira kusvika pavanhu vangasvika mamirioni 14 munaGunyana 3.4. Pamhenderekedzo yeBulgaria Nhema Gungwa, nhandare dzeTwin Star dzeBurgas (BOJ) neVarna (VAR) yakashumawo traffic yepamusoro ine huwandu hwevatakuri 2021 328,990 vakashumirwa. . Antalya Airport (AYT) muTurkey yakagamuchira vamwe vangangoita mamirioni 3.8. St Petersburg's Pulkovo Airport (LED) muRussia yaive nevatakuri vangangosvika mamirioni 1.9. Xi'an Airport (XIY) muChina yakanyora pasi pevane mamirioni e2.3 vafambi mumwedzi wekuzivisa.
Dhawunirodha iyo Traffic Dhata (PDF)